သင်္ကြန်မှာတော့ လူတန်းစား အမျိုးမျိုးက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပျော်ကြတာပဲနော်…။ ဖိုးတေတို့လို လူတန်းစားတွေ အတွက်ကတော့ ဘ၀အတွက် ၀မ်းရေးအတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပေါ့။ ပိုက်ဆံပေါတဲ့ သူတွေအတွက်လဲ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပိုက်ဆံဖြုန်းလို့ အကောင်းဆုံး ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုပဲလေ။ တရားရှာချင်တဲ့သူတွေကျပြန်တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်ကြ၊ ရိပ်သာဝင်ကြနဲ့…။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ သင်္ကြန်မှာ တမျိုးစီ ပျော်ကြတာပေါ့ အကိုရေ…။ အဝေးရောက်မြန်မာတွေကတော့ သင်္ကြန်ပွဲကို လွမ်းနေကြမှာပဲနော်။
Apr 10, 2008, 9:44:00 PM
nice post ko ko,
I'm glad to read that post.
But, feel sad to read for surviving of life.
အားလုံးအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်တွေ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ ဖွင့်ကြတဲ့ သင်္ကြန်လို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ မျိုးမှာ ဖိုးတေလို အဖြစ် ခလေးတော်၂များ၂ ရှိကြမှာပါ မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအဖို့ တော့ ပျော်စရာဆိုတာ ၀မ်းစာရေးလောက် အရေးမကြီးပါဘူး ။ သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတစ်ထွာမို့ ပဲနော် မဟုတ်ရင်တော့ ရင်လေစ၇ား)
ကိုစေးထူးရဲ့ပို့စ်က သင်္ကြန်မှာ ပျော်နေတဲ့သူတွေရော ၀မ်းစားအတွက် လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ပါ ရေးပြသွားတာ ဖတ်ရင်း မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လာမိတယ်။ တနှစ်နဲ့ တနှစ် သင်္ကြန်တွင်း ပျော်တဲ့သူကပျော်ပေါ့။ ၀မ်းရေးအတွက် စီးပွားရှာသူကလည်း ရှာနဲ့ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြီးသွားပြန်တာပါပဲ...
အင်း ... တွေ့မြင်နေကျ ဘ၀လေးတွေကို ထင်ဟပ် ပြပေးတာ ကျေးဇူး ...
Apr 11, 2008, 9:12:00 AM
၀မ်းရေးအတွက် အပျော်ကိုမေ့ထားပြီး လှုပ်
Apr 11, 2008, 9:49:00 AM
နှစ်တွေ ဘယ်လိုဘဲ ပြောင်း၂ ၊ မပြောင်း လဲ တာကတော့ မြန်မာဓလေ့ သင်္ကြန်ပွဲ ရဲ့ ပျော်ရွှင် မှုပါဘဲ။ ကိုယ် တိုင် ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ ၊ မ ပါဝင်ဘဲ စာပေ အားဖြင့် ၊ အများသူငါ ပြောတာကြား ရ ပြီး လွမ်း ရ ၊ ရသ မျိုးစုံ ခံစား ရ တာ ဟာ မြန်မာတို့ ရဲ့ သင်္ကြန်ပွဲ ပါ။။
သင်္ကြန်ကိုရော ဘဝသရုပ်ဖော်ပါ မျက်စိထဲမှာပေါ်လာပါတယ်..
Apr 13, 2008, 3:05:00 AM
ဖိုးတေတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိုးတေဘဝကို တခုတ်တရ စာဖွဲ့တတ်တဲ့ ကိုစေးထူးတွေတော့ အများကြီးမတွေ့ဘူး။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ...။
Apr 17, 2008, 4:20:00 AM